Yeremia 50 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Nkɔmhyɛ a etia Babilon (1-46)
Munguan mfi Babilon (8)
Wɔbɛsan de Israel aba (17-19)
Babilon nsu bɛyow (38)
Obiara rentena Babilon (39, 40)
50 Asɛm a Yehowa nam odiyifo Yeremia so ka faa Babilon ho+ ne nea ɔka faa Kaldeafo asaase ho ni: 2 “Monka wɔ amanaman no mu, na mommɔ no dawuru. Momma ahyɛnsode* so na mommɔ no dawuru. Mommfa hwee nnsie! Monka sɛ, ‘Wɔadi Babilon so nkonim.+ Wɔagu Bel anim ase.+ Ehu aka Merodak. Wɔagu n’ahoni anim ase. Ehu aka n’abosom fĩ* no.’ 3 Efisɛ ɔman bi fi atifi fam aba no so.+ Ama n’asaase adan biribi a ɛyɛ hu;Obiara nte hɔ. Nnipa ne mmoa nyinaa aguan;Wɔn nyinaa kɔ.” 4 “Saa nna no ne saa bere no,” Yehowa asɛm ni, “Israelfo ne Yudafo bɛbom aba.+ Wɔde osũ na ɛbɛnantew aba.+ Na wɔbɛbom ahwehwɛ Yehowa wɔn Nyankopɔn no.+ 5 Wobebisa baabi a Sion kwan wɔ, na wɔde wɔn ani bɛkyerɛ hɔ+ aka sɛ, ‘Mommra mma yɛmfa yɛn ho nkɔbata Yehowa ho na yɛne no nyɛ daa apam a obiara werɛ remfi.’+ 6 Me man adan nguan a wɔayera.+ Wɔn ankasa ahwɛfo ama wɔafom kwan.+ Wɔde wɔn nenam mmepɔw so; wofi bepɔw so a, na wɔkɔ koko so. Wɔn werɛ afi wɔn homebea. 7 Wɔn a wohu wɔn nyinaa kyere wɔn we,+ na wɔn atamfo ka sɛ, ‘Yenni fɔ, efisɛ Yehowa na wɔayɛ no bɔne; wɔayɛ bɔne atia Yehowa a ɔyɛ trenee tenabea ne wɔn agyanom anidaso no.’” 8 “Munguan mfi Babilon,Mumfi Kaldeafo asaase so nkɔ,+Na monyɛ sɛ adwennini* a wodi nguan anim. 9 Hwɛ, merema aman akɛse aba Babilon so,Aman bebree a wofi atifi fam asaase so.+ Wɔbɛhyehyɛ wɔn ho aba na wɔne no abɛko,*Na ɛhɔ na wobefi adi no so nkonim. Wɔn agyan te sɛ ɔsabarima de,Na ekunkum nkurɔfo mma;+Wɔnsan wɔn akyi, gye sɛ wɔawie wɔn adwuma. 10 Kaldea bɛdan nneɛma a nkurɔfo nya fi ɔko mu.*+ Wɔn a wɔfom ne nneɛma nyinaa bɛmee paa,”+ Yehowa asɛm ni. 11 “Efisɛ mudii ahurusi,+ na mo ani gyeiBere a morefom m’ankasa m’agyapade no.+ Mokɔɔ so de mo nan dwiridwiriw fam te sɛ nantwi* a ɔde ne nan dwiridwiriw sare,Na mokɔɔ so sui sɛ apɔnkɔnini. 12 Wɔagu mo maame anim ase.+ Nea ɔwoo mo no nsa asi fam. Hwɛ! Ɔno ne ɔman a mfaso nni so koraa wɔ amanaman mu,Ɔyɛ sare a nsu nni so ne anwea pradadaa.+ 13 Yehowa abufuw nti, obiara rentena mu;+Ɛbɛsɛe pasaa.+ Obiara a obetwam wɔ Babilon bɛtɛɛ n’anom ahwɛ,Na obedi ne ho fɛw,* mmusu a ɛbɛba no so no nyinaa nti.+ 14 Monhyehyɛ mo ho nkɔ Babilon so wɔ afã nyinaa,Mo a mukuntun agyan mu* nyinaa. Montow agyan nkɔ no so, munnnyaw agyan no baako mpo,+Efisɛ Yehowa na wayɛ no bɔne.+ 15 Monteɛm denneennen ngu no so wɔ afã nyinaa. Ɔde ne ho ama* efisɛ wadi nkogu. N’adum abubu, n’afasu adwiriw agu.+Efisɛ ɛyɛ Yehowa na ɔretua no ka.+ Muntua no so ka. Nea ɔde ayɛ nkurɔfo no, saa ara na momfa nyɛ no.+ 16 Muntwa ogufo mfi Babilon,Na muntwa nea okura kantankrankyi* wɔ twabere mu no mfi hɔ.+ Atirimɔden sekan no nti, obiara bɛsan akɔ ne nkurɔfo nkyɛn,Na obiara beguan akɔ n’asaase so.+ 17 “Israelfo yɛ nguan a wɔahwete.+ Agyata abɔ wɔn apansam.+ Nea edi kan, Asiria hene tetew wɔn mu;+ ɛnna Babilon hene Nebukadnesar* nso bobɔɔ wɔn nnompe mu.+ 18 Enti nea asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn no aka ni: ‘Hwɛ, Babilon hene ne n’asaase nyinaa, mɛyɛ wɔn ade, sɛnea meyɛɛ Asiria hene ade no.+ 19 Na mɛsan de Israel aba n’adidibea,+ na obedidi wɔ Karmel ne Basan.+ Na obedidi* amee wɔ Efraim+ ne Gilead+ mmepɔw so.’” 20 “Saa nna no ne saa bere no,” Yehowa asɛm ni,“Wɔbɛhwehwɛ Israel mmaratoNanso wɔrenhu,Na Yuda bɔne nso, wɔrenhu,Efisɛ wɔn a mɛma wɔaka no, mede wɔn bɔne bɛkyɛ wɔn.”+ 21 “Foro kɔtow hyɛ Merataim asaase no so, na kɔ Pekodfo so.+ Ma wonkunkum wɔn nyinaa, na wɔnsɛe wɔn pasaa,” Yehowa asɛm ni, “Yɛ nea maka akyerɛ wo no nyinaa. 22 Ɔko nnyigyei wɔ asaase no so,Ɛyɛ amanehunu* kɛse. 23 Hamma* a ebubu asaase so aman nyinaa no, hwɛ sɛnea wɔatwa ato fam na wɔabubu no!+ Hwɛ sɛnea Babilon adan biribi a ɛyɛ hu wɔ amanaman no mu!+ 24 O Babilon, masum wo afiri ama ayi wo,Nanso woanhu. Wɔahu wo, na wɔakyere wo,+Efisɛ Yehowa na woko tiaa no. 25 Yehowa abue n’adekoradan,Na wayi n’abufuhyew akode apue.+ Efisɛ Awurade Tumfo, asafo Yehowa wɔ adwuma bi yɛWɔ Kaldeafo asaase so. 26 Mumfi akyirikyiri mmra no so.+ Mummue adan a ɔkora n’aduan wom no.+ Mommoaboa n’ano nsum hɔ te sɛ awi.* Monsɛe no pasaa.+ Mommma onipa biara nnka mmma no. 27 Munkunkum n’anantwinini nkumaa nyinaa.+Momma wonsian nkɔ mma wonkunkum wɔn. Asɛm ato wɔn, efisɛ wɔn bere aso;Wɔn akontaabu da no aso! 28 Wɔte wɔn a wɔreguan no nne,Wɔn a wɔreguan afi Babilon asaase so no.Wɔrekɔka wɔ Sion sɛ Yehowa yɛn Nyankopɔn no retua bɔne so ka,Ɔretua bɔne so ka ama n’asɔrefi.+ 29 Momfrɛfrɛ agyantofo nkɔ Babilon so,Wɔn a wokuntun agyan mu* nyinaa.+ Muntwa ne ho nhyia; mommma obiara nnguan. Muntua no ka sɛnea ne nnwuma te.+ Nea ɔde ayɛ nkurɔfo no, saa ara na momfa nyɛ no.+ Efisɛ wayɛ ahantan wɔ Yehowa so,Wayɛ ahantan wɔ Israel Kronkronni no so.+ 30 Enti ne mmerante bɛtotɔ wɔ ne mmɔnten so,+Na n’asraafo nyinaa bɛsɛe* saa da no,” asafo Yehowa asɛm ni. 31 “O wo a wummu hwee,+ hwɛ! me ne wo anya,”+ Awurade Tumfo, asafo Yehowa asɛm ni,“Efisɛ wo da bɛba, ɛda a mɛma woabu akontaa no. 32 O wo a wummu hwee, wubehintiw na woahwe ase,Na worennya obiara mma wo so.+ Mede ogya bɛto wo nkurow mu,Na ɛbɛhyew biribiara a atwa wo ho ahyia.” 33 Nea asafo Yehowa aka ni: “Wɔhyɛ Israelfo ne Yudafo so,Na wɔn a wɔakyere wɔn kɔ no ayere wɔn.+ Wɔmpɛ sɛ wogyaa wɔn ma wɔkɔ.+ 34 Nanso wɔn Gyefo no ho yɛ den.+ Asafo Yehowa ne ne din.+ Nea ɛte biara, obedi wɔn asɛm ama wɔn+Sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛma asaase no ahome,+Na wama Babilonfo ho ayeraw wɔn.”+ 35 “Sekan reba Kaldeafo so,” Yehowa asɛm ni,“Ɛreba Babilonfo ne wɔn mpanyimfo ne wɔn anyansafo so.+ 36 Sekan reba wɔn a wɔka nsɛnhunu* so, na wobedi nkwaseasɛm. Sekan reba ne mmarima a wonim ko so, na wɔbɛbɔ hu.+ 37 Sekan reba wɔn apɔnkɔ ne wɔn ko nteaseɛnam so,Sekan reba firamanfiramanfo a wɔwɔ ne mu no nyinaa so,Na wɔbɛyɛ sɛ mmea.+ Sekan reba n’agyapade so, na nkurɔfo bɛfom.+ 38 Wɔn nsu bɛsɛe na ayow.+ Efisɛ ɛyɛ ahoni asaase,+Na wɔn anisoadehu a ɛyɛ hu no nti, wɔkɔ so yɛ wɔn nneɛma sɛ abɔdamfo. 39 Ɛno nti, sare so mmoa ne mmoa a wosu te sɛ kraman na ɛbɛtena hɔ,Na nsohori nso bɛtena hɔ.+ Onipa biara rentena hɔ bio da,Na obiara remfa hɔ nyɛ ne tenabea awo ntoatoaso nyinaa mu.”+ 40 “Sɛnea Onyankopɔn butuw Sodom ne Gomora+ ne ɛho nkurow no,”+ Yehowa asɛm ni, “saa ara na obiara rentena hɔ, na onipa biara rensoɛ hɔ.+ 41 “Hwɛ! Ɔman bi fi atifi fam reba.Wɔbɛma ɔman kɛse bi ne ahemfo akɛse+Afi akyirikyiri asaase so aba.+ 42 Wokurakura agyan ne peaw.+ Wɔn tirim yɛ den, na wɔrenhu obiara mmɔbɔ.+ Wɔn nnyigyei te sɛ ɛpo a ɛrebu fa so,+Bere a wɔtete wɔn apɔnkɔ so reba no. Wɔahyehyɛ wɔn ho aka abom sɛ onipa baako ne wo rebɛko, O Babilon babea.+ 43 Babilon hene ate wɔn ho amanneɛbɔ,+Na ne nsam agow.+ Ne ho yeraw no,Na ɛyaw a ɔrefa mu no te sɛ ɔbea a ɔrewo. 44 “Hwɛ! Obi bɛforo abɛtow ahyɛ adidibea a wɔabɔ ho ban no so te sɛ gyata a ofi Yordan kwaebirentuw mu, nanso mɛma wɔaguan* afi hɔ ntɛm. Na mɛma nea wɔapaw no no adi no so.+ Hena na ɔte sɛ me, na hena na ɔne me bedi asi? Oguanhwɛfo bɛn na obetumi agyina m’anim?+ 45 Enti mmarima, muntie pɔw a Yehowa abɔ wɔ Babilon ho;+ na nea wabɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ Kaldeafo asaase ni: Nea ɛte biara, wɔbɛtwe nguan mma no ase akɔ. Wɔn nti, ɔbɛma wɔn tenabea asɛe pasaa.+ 46 Sɛ wodi Babilon so nkonim a, ɛho dede no bɛma asaase awosow,Na wɔbɛte nteɛteɛm wɔ amanaman no mu.”+
^ Anaa “mpapo.”
^ Anaa “abetwa ne ho mpasua.”
^ Nt., “ɔbɛhwɛ abɔ hwirema.”
^ Nt., “mutiatia agyan so.”
^ Nt., “Wama ne nsa so.”
^ Anaa “ne kra bedidi.”
^ Anaa “ɔsɛe.”
^ Nt., “wotiatia agyan so.”
^ Nt., “bɛyɛ dinn.”
^ Ebetumi aba sɛ ɛfa Babilonfo ho.